Ny endrika vaovao amin'ny E-Commerce: Ny fiantraikan'ny fianarana milina eo amin'ny indostria | Martech Zone
Efa nieritreritra ve ianao fa ny solosaina dia mety ho afaka mamantatra sy mianatra lamina mba handraisana fanapahan-kevitra manokana? Raha tsia ny valinteninao, dia ao anaty sambo mitovy amin'ny manam-pahaizana maro amin'ny indostrian'ny e-varotra ianao; tsy nisy afaka naminavina ny toetrany ankehitriny.
Na izany aza, ny fianarana milina dia nitana anjara toerana lehibe tamin'ny fivoaran'ny e-varotra tato anatin'ny folo taona farany. Andeha hojerentsika hoe aiza ny e-varotra amin'izao fotoana izao ary ahoana mpanome tolotra fianarana milina hamolavola azy tsy ho ela.
Inona no fiovana eo amin'ny indostrian'ny E-varotra?
Ny sasany dia mety mino fa ny e-varotra dia tranga vaovao izay nanova tanteraka ny fomba fiantsenantsika, noho ny fandrosoana ara-teknolojia eo amin'ny sehatra. Tsy izany mihitsy anefa no mitranga.
Na dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fomba ifandraisantsika amin'ny fivarotana ankehitriny aza ny teknolojia, efa nisy 40 taona mahery ny e-varotra ary lehibe kokoa noho ny hatramin'izay.
Nahatratra 4.28 trillion dolara ny varotra e-varotra eran-tany tamin'ny taona 2020, ary ny fidiram-bolan'ny e-varotra andrasana hahatratra 5.4 trillion dolara amin'ny 2022.
Saingy raha nisy foana ny teknolojia, ahoana no hanovan'ny fianarana milina ny indostria ankehitriny? Tsotra izany. Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia manafoana ny sarin'ny rafitra famakafakana tsotra mba hampisehoana fa tena mahery sy manova tokoa izany.
Tany am-piandohana, ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny fianarana milina dia tsy novolavolaina ary tsotra loatra tamin'ny fanatanterahana azy ireo mba hamirapiratra marina amin'ny lafiny fampiharana azo atao. Tsy izany intsony anefa no mitranga.
Ny marika dia mety hampiasa hevitra toy ny fikarohana amin'ny feo mba hampiroboroboana ny vokatra eo imason'ny mpanjifa satria mihamitombo ny teknolojia toy ny fianarana milina sy chatbots. AI dia afaka manampy amin'ny vinavinan'ny vinavina sy ny fanohanana backend.
Masinina fianarana sy soso-kevitra
Betsaka ny fampiharana lehibe amin'ity teknolojia ity amin'ny e-varotra. Amin'ny sehatra manerantany, ny maotera fanolorana dia iray amin'ireo fironana mafana indrindra. Azonao atao ny manombatombana tsara ny hetsika an-tserasera ataon'ny olona an-jatony tapitrisa amin'ny fampiasana algorithm fianarana milina sy fanodinana angona be dia be amin'ny mora. Azonao atao ny mampiasa azy io mba hamokarana tolo-kevitra momba ny vokatra ho an'ny mpanjifa na vondron'ny mpanjifa manokana (fizarana mandeha ho azy) mifototra amin'ny tombontsoany.
Azonao atao ny mamantatra hoe ny zana-pejy ampiasain'ny mpanjifa amin'ny fanombanana ny angona lehibe azo amin'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala ankehitriny. Azonao atao ny milaza hoe inona no notadiaviny ary taiza no nandaniany ny ankamaroan'ny fotoanany. Fanampin'izany, ny valiny dia homena amin'ny pejy manokana miaraka amin'ny soso-kevitra mifototra amin'ny loharanom-baovao maro: mombamomba ny hetsika nataon'ny mpanjifa teo aloha, ny zavatra mahaliana (oh: fialamboly), toetrandro, toerana, ary angon-drakitra media sosialy.
Fianarana milina sy Chatbots
Amin'ny alàlan'ny famakafakana angona voarafitra, ny chatbots ampiasain'ny fianarana milina dia afaka mamorona resaka “olombelona” bebe kokoa amin'ireo mpampiasa. Ny chatbots dia azo karakaraina miaraka amin'ny fampahalalana ankapobeny hamaly ny fanontanian'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fianarana milina. Amin'ny ankapobeny, arakaraka ny olona mifandray amin'ny bot no hahatakarany tsara kokoa ny vokatra / serivisy amin'ny tranokala e-varotra. Amin'ny alàlan'ny fametrahana fanontaniana, ny chatbots dia afaka manome tapakila ho an'ny tena manokana, manambara ny mety ho fisondrotana, ary mamaly ny filan'ny mpanjifa maharitra. Manodidina ny $28,000 eo ho eo ny vidin'ny famolavolana, fananganana ary fampidirana chatbot mahazatra ho an'ny tranokala iray. Ny fampindramam-bola ho an'ny orinasa madinika dia azo ampiasaina mora foana handoavana izany.
Fianarana milina sy valin'ny fikarohana
Ny mpampiasa dia afaka mampiasa fianarana milina mba hahitana marina izay tadiaviny mifototra amin'ny fangatahana fikarohana ataony. Ny mpanjifa amin'izao fotoana izao dia mikaroka vokatra amin'ny tranokala e-varotra amin'ny fampiasana teny fanalahidy, noho izany dia tsy maintsy miantoka ny tompon'ny tranokala fa ireo teny fanalahidy ireo dia voatendry ho an'ny vokatra tadiavin'ny mpampiasa.
Ny fianarana milina dia afaka manampy amin'ny fitadiavana ireo teny mitovy hevitra amin'ny teny fototra ampiasaina matetika, ary koa ireo fehezanteny azo ampitahaina ampiasain'ny olona amin'ny fanontaniana mitovy. Ny fahafahan'ity teknolojia ity hahatratra izany dia avy amin'ny fahaizany manombana tranonkala iray sy ny famakafakana azy. Vokatr'izany, ny tranokala e-varotra dia afaka mametraka vokatra avo lenta eo an-tampon'ny pejy raha manao laharam-pahamehana ny tahan'ny kitiho sy ny fiovam-po teo aloha.
Amin'izao fotoana izao, ny goavambe tia eBay nahatsapa ny maha zava-dehibe izany. Miaraka amin'ny entana maherin'ny 800 tapitrisa naseho, ny orinasa dia afaka maminavina sy manolotra ny valin'ny fikarohana mifandraika indrindra amin'ny fampiasana faharanitan-tsaina sy analyse.
Machine Learning sy E-varotra Targeting
Tsy toy ny fivarotana ara-batana, izay ahafahanao miresaka amin'ny mpanjifa mba hianarana izay tadiaviny na ilainy, ny fivarotana an-tserasera dia voadaroka amin'ny angon-drakitra mpanjifa marobe.
Vokatr'izany, fizarana mpanjifa dia zava-dehibe ho an'ny indostrian'ny e-varotra, satria mamela ny orinasa hampifanaraka ny fomba fifandraisany amin'ny mpanjifa tsirairay. Ny fianarana milina dia afaka manampy anao hahatakatra ny filan'ny mpanjifanao ary hanome azy ireo traikefa amin'ny fividianana mifanaraka kokoa.
Fianarana milina sy ny traikefan'ny mpanjifa
Ny orinasa e-varotra dia afaka mampiasa fianarana milina mba hanomezana traikefa manokana ho an'ny mpanjifany. Ny mpanjifa amin'izao fotoana izao dia tsy tia fotsiny fa mitaky ny hifandray amin'ny marika tiany amin'ny fomba manokana. Ny mpivarotra dia afaka mampifanaraka ny fifandraisana tsirairay amin'ny mpanjifany amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina artifisialy sy fianarana milina, ka miteraka traikefa mpanjifa tsara kokoa.
Ankoatr'izay, afaka misoroka ny olana momba ny fikarakarana mpanjifa izy ireo amin'ny alàlan'ny fianarana milina. Miaraka amin'ny fianarana milina, tsy isalasalana fa hihena ny tahan'ny fandaozana sarety ary hitombo ny varotra amin'ny farany. Ny bots mpanohana ny mpanjifa, tsy toy ny olombelona, ​​dia afaka manome valiny tsy miangatra amin'ny fotoana rehetra na andro na alina.
Fianarana milina sy fikarohana hosoka
Mora kokoa ny mahita ny anomalia rehefa manana data bebe kokoa ianao. Noho izany, afaka mampiasa fianarana milina ianao mba hahitana ny fironana amin'ny angona, hahatakatra ny 'ara-dalàna' sy ny tsy mety, ary hahazo fampandrenesana rehefa misy zavatra tsy mety.
'Fraud detection' no fampiharana mahazatra indrindra amin'izany. Ny mpanjifa mividy entana be dia be amin'ny carte de crédit halatra na manafoana ny baikony aorian'ny fanaterana ny entana dia olana mahazatra ho an'ny mpivarotra. Eto no miditra ny fianarana milina.
Fianarana amin'ny masinina sy vidim-bidy dinamika
Raha ny vidin'ny dinamika, ny fianarana milina amin'ny e-varotra dia mety ho tena mahasoa ary afaka manampy anao hanatsara ny KPI-nao. Ny fahaiza-manaon'ny algorithm amin'ny fianarana lamina vaovao avy amin'ny angona no loharanon'ity mahasoa ity. Vokatr'izany, ireo algorithm ireo dia mianatra tsy tapaka ary mahita fangatahana sy fironana vaovao. Raha tokony hiantehitra amin'ny fampihenana ny vidiny tsotra, ny orinasa e-varotra dia afaka mahazo tombony amin'ny maodely vinavina izay afaka manampy azy ireo hamantatra ny vidiny tsara indrindra ho an'ny vokatra tsirairay. Azonao atao ny misafidy ny tolotra tsara indrindra, ny vidiny tsara indrindra, ary mampiseho fihenam-bidy amin'ny fotoana tena izy, ary mandinika ny paikadin'ny tsara indrindra hampitomboana ny varotra sy ny fanatsarana ny tahiry.
Ny fomba famolavolan'ny fianarana milina ny indostrian'ny e-varotra dia tsy tambo isaina. Ny fampiharana an'io teknolojia io dia misy fiantraikany mivantana amin'ny serivisy mpanjifa sy ny fitomboan'ny orinasa amin'ny indostrian'ny e-varotra. Ny orinasanao dia hanatsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny fanohanan'ny mpanjifa, ny fahombiazana ary ny famokarana, ary koa mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa momba ny HR. Ny algorithm fianarana milina ho an'ny e-varotra dia hitohy ho serivisy lehibe amin'ny orinasa e-varotra rehefa mivoatra izy ireo.
Jereo ny lisitry ny orinasan'ny Machine Learning an'ny Vendorland
Tags: vidiny mavitrikae-varotraecommercefanolorana vokatra e-varotravalin'ny fikarohana e-varotrafizarana ecommercefahitana hosokafianarana milinafikarohana hosoka fianarana milinafizarana fianarana milinampanome tolotra fianarana milinamaotera fanolorana vokatravokatry ny fikarohana vokatrasegmentation